2 Beresosɛm 28 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 28:1-27
28 Ahas+ bedii ade no, na wadi mfe aduonu, na odii hene mfe dunsia wɔ Yerusalem,+ nanso wanyɛ nea ɛteɛ Yehowa ani so sɛ ne nana Dawid.+ 2 Israel ahene akwan so na ɔfae,+ na ɔnan dade+ de yeyɛɛ Baal+ ahoni nso. 3 Ɔhyew afɔrebɔde+ wɔ Hinom ba bon+ no mu, na ɔhyew ne mma+ ogya mu nam so yɛɛ akyide+ a amanaman a Yehowa pam wɔn fii Israelfo anim no yɛe no bi.+ 4 Ɔbobɔɔ afɔre,+ na ɔhyehyew afɔrebɔde wɔ sorɔnsorɔmmea+ ne nkoko+ so ne nnua kusuu+ nyinaa bi ase. 5 Ɛnna Yehowa, ne Nyankopɔn de no hyɛɛ Siria+ hene nsa+ ma odii no so nkonim, na ɔfaa nnipa bebree nnommum kɔɔ Damasko.+ Ɔde no hyɛɛ Israel hene nso nsa+ ma ɔde okunkɛse kunkum ne nkurɔfo. 6 Enti Remalia ba+ Peka+ kunkum mmarima akokodurufo a wɔn ho yɛ den mpem ɔha aduonu da koro wɔ Yuda, efisɛ wogyaw Yehowa,+ wɔn agyanom Nyankopɔn no. 7 Afei nso Efraim+ dɔmmarima Sikri kum ɔhene ba Maaseia ne ɔhene fiepanyin Asrikam ne ɔhene abadiakyiri Elkana. 8 Bio nso Israelfo no faa wɔn nuanom mu mpem ahanu nnommum, mmea, mmabarima, ne mmabea; na wɔfow wɔn nneɛma pii de yɛɛ asade, na wɔde kɔɔ Samaria.+ 9 Ná Yehowa diyifo bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Oded. Ofii adi kohyiaa asraafo a wɔreba Samaria no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Mo agyanom Nyankopɔn bo fuw+ Yuda nti na ɔde wɔn hyɛɛ mo nsa ma mode abufuw+ a edu ɔsoro+ kunkum wɔn no. 10 Afei mopɛ sɛ mode Yuda ne Yerusalemfo yɛ mo nkoa+ ne mo mfenaa. Na mo nso, monyɛɛ bɔne ntiaa Yehowa mo Nyankopɔn anaa? 11 Afei muntie me, na monsan mfa mo nuanom a moafa wɔn nnommum no nkɔ,+ efisɛ Yehowa abufuhyew wɔ mo so.”+ 12 Ɛnna Efraim+ mma mu atitiriw+ bi, Yehohanan ba Asaria, Mesilemot ba Berekia, Salum ba Yehiskia, ne Hadlai ba Amasa sɔre kɔɔ wɔn a wofi ɔsa reba no so, 13 na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommfa nnommum no mmma ha, na ɛbɛma yɛayɛ bɔne atia Yehowa. Yɛn asodi dɔɔso dedaw,+ na morebɛyɛ ama yɛn bɔne ne yɛn asodi no bi abɛka ho, na abufuhyew+ aba Israel so.” 14 Enti asraafo+ no gyaw nnommum+ no ne asade no wɔ mpanyimfo+ ne asafo no nyinaa anim. 15 Ɛnna mmarima a wɔbobɔɔ wɔn din+ yiyii wɔn no sɔree, na wɔfaa nnommum no, na wɔn a wɔdeda adagyaw no, wɔde asade no bi hyehyɛɛ wɔn. Enti wɔhyehyɛɛ wɔn ntade+ ne mpaboa, na wɔmaa wɔn aduan+ ne nea wɔbɛnom,+ na wɔsraa wɔn. Afei nso, wɔn a wontumi nnantew nyinaa, wɔde wɔn tenatenaa mfurum so+ de wɔn baa wɔn nuanom nkyɛn wɔ Yeriko,+ mmɛ kurow+ no mu. Ɛno akyi no, wɔsan wɔn akyi kɔɔ Samaria.+ 16 Saa bere no, Ɔhene Ahas+ soma kɔɔ Asiria ahene+ nkyɛn sɛ wɔmmɛboa no. 17 Ɛnna Edomfo+ nso bae, na wɔbɛtow hyɛɛ Yuda so kunkum wɔn mu bi, na wɔfaa nnommum kɔe. 18 Filistifo+ nso bɛtow hyɛɛ Sefela+ ne Negeb+ nkurow a ɛwɔ Yuda no so, na wɔfaa Bet-Semes+ ne Ayalon+ ne Gederot+ ne Soko+ ne ɛho nkurow, ne Timna+ ne ɛho nkurow, ne Gimso ne ɛho nkurow, na wɔtenatenaa hɔ. 19 Yehowa brɛɛ Yuda ase,+ Israel hene Ahas nti, efisɛ ɔmaa ɔbrabɔne dɔɔso wɔ Yuda,+ na ɔyɛɛ Yehowa bɔne bebree. 20 Na Asiria hene Tilgat-Pilneser*+ baa no so behiahiaa ne ho,+ na wanhyɛ no den. 21 Na Ahas praa Yehowa fie+ ne ahemfie+ ne mpanyimfie+ hɔ nneɛma nyinaa, na ɔde kyɛɛ Asiria hene,+ nanso ammoa no. 22 Bere a ɔrehiahia no ho nyinaa no, Ɔhene Ahas de, bɔne ara na ɔyɛɛ Yehowa.+ 23 Na ofii ase bɔɔ afɔre maa Damasko+ anyame+ a wɔkaa no gui no, na ɔkae sɛ: “Sɛ Siria ahene anyame reboa wɔn+ a, ɛnde me nso mɛbɔ afɔre ma wɔaboa+ me.” Na wɔn na wɔbɛyɛɛ hintidua maa ɔno ne Israel+ nyinaa. 24 Afei nso, Ahas boaboaa nokware Nyankopɔn fie hɔ anwenne+ ano, na otwitwaa nokware Nyankopɔn fie hɔ anwenne no mu asinasin,+ na ɔtotoo Yehowa fie apon+ mu, na osisii afɔremuka wɔ Yerusalem baabiara.+ 25 Ɔyeyɛɛ sorɔnsorɔmmea+ wɔ nkurow nyinaa mu, kyerɛ sɛ, Yuda nkurow mu sɛ wɔnhyew afɔrebɔde mma anyame foforo,+ na ɔde hyɛɛ Yehowa, n’agyanom Nyankopɔn no abufuw.+ 26 Ne ho nsɛm a aka+ ne n’akwan nyinaa, ne mfiase kosi n’awiei, wɔakyerɛw wɔ Israel ne Yuda Ahene Nhoma+ no mu. 27 Na Ahas ne n’agyanom kɔdae, na wosiee no kurow no mu wɔ Yerusalem, na wɔamfa no ankɔ Israel ahene amusiei hɔ.+ Na ne ba Hesekia bedii n’ade.
^ Anaa Tiglat-Pilesa.
2 Beresosɛm 28